Madaxweyne Axmed Madoobe oo Amray in la soo qabto Nin Fal aad u fool ka Sameeyay Puntand | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Axmed Madoobe oo Amray in la soo qabto Nin Fal aad...
Madaxweyne Axmed Madoobe oo Amray in la soo qabto Nin Fal aad u fool ka Sameeyay Puntand
Ninkii 27-kii bishii October magaalada Boosaaso tacadi iyo dhibaato ugu geystay Faaizo Cabdi Xaye oo ah gabar 16 sano jir ah ayaa lagu daba jiraa, kaasi oo sida la sheegay ka tirsan Ciidanka Puntland.
Tacadiga ayaa yimid kadib markii ninka uu isku dayay in gabadha uu kufsado, balse ay Faa’isa ay ka dhega fureysatay, sidaasina uu gabadha ugu xoog sheegtay, kadibna uu xubinta Taranka kala dhacay Rasaas.
Gabadha dhaawaceeda ayaa durbadiiba waxaa loo soo qaaday Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku booqdeen Wasiiro ka tirsan Dowladda Soomaaliya iyo dadweyne kale.
Aabaha dhalay gabadhan oo lagu magacaabo Cabdi Xaye oo la hadlay VOA ayaa sheegay in gabadhiisa lagu sameeyay qaliin, xaaladeedana ay tahay mid halis ah.
Wasaaradda Cadaaladda Puntland oo arrintan dib kala buraarugtay ayaa amartay in gacanta lagu soo dhigo ninkaasi tacadiga naxariis darada ah u geystay gabadha.
Eedeysanaha ayaa markii uu maqlay in lagu daba jiro wuxuu cabsi iyo qalqal darted wuxuu nafsadiisa kaa soo baxsaday magaalada Boosaaso, isaga oo gabaad ka soo raadiyay Guriga Guddoomiyaha magaalada Kismaayo oo uu ku soo degay.
Balse Puntland ayaa durbadiiba la soo xiriirtay Jubbaland waxayna u sheegtay ninkaasi in la raadinayo oo dambiile uu yahay.
Madaxweynaha Jubbaland oo telefoon kula hadlay Guddoomiyaha Kismaayo iyo laamaha amniga ayaa amray in gacanta lagu soo dhigo ninka, wuxuuna ninka baxsaday guriga Guddoomiyaha, Ciidamada ammaanka ayaa xalay Howlgallo lagu raadinayo ninkaasi.